पर्यटनमन्त्रीको प्रश्न– 'पोखराबाट प्लेनमा के बोकाएर पठाउनुहुन्छ ?'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
भाद्र ११, २०७६ दीपक परियार
पोखरा — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले बुधबार निर्माणाधिन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गरे । विमानस्थल निर्माणको प्रगतिबारे जानकारी लिए । जनप्रतिनिधिका कुरा र स्थानीयका गुनासा पनि सुने । सबैका कुरा सुनेपछि जनप्रतिनिधितिर फर्कदै उनले सोधे– 'मान्छेबाहेक प्लेनमा बोकाएर पठाउने के छ तपाईंहरुसँग ?'
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेपछि हवाइजहाजले मान्छे मात्रै नबोकेर व्यापार पनि गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘यहाँबाट कार्गो हुन सक्छ । कार्गोका निम्ति मालसामान चाहियो । पोखराका जनप्रतिनिधि साथीहरु हुनुहुन्छ, प्लेनले के बोकेर जान्छ ? मान्छेमात्रै बोकेर जान्छ कि माल बोकेर जान्छ ?,’ उनले भने, ‘माल बोकेर जानुपर्‍यो । माल के छ तपाईंहरुसँग ? तपाईंले के माल बोकाएर पठाउनुहुन्छ प्लेनमा ? सोच्नुस् ।’ उनले प्यासेन्जर फ्लाइटमा मात्रै जहाज नाफामा नजाने बताए ।
भने, ‘मान्छेमात्रै बोकेर प्लेन फाइदामा हुँदैन । माल बोक्नुपर्‍यो । के–के उत्पादन गर्नुहुन्छ ? टनका टन माल बोकेर जानुपर्‍यो ।’
विमानस्थल बनिसकेपछि पोखराका हालका सडक उपयुक्त नहुने, हालकै होटलले व्यापार गर्न नसक्ने बताए । सडकलगायत पूर्वाधार स्तरीय बनाउन तयारी थालिहाल्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । सडकको कुरा पोखरा विमानस्थलसँग सम्बन्धित भएपनि आफ्नो जिम्मा नभएको उनले जनाए । त्यसका लागि आवश्यक परे आयोजना, प्रदेश र स्थानीतहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र बनाउनपर्ने उनले बताए ।
मन्त्री भट्टराईले पोखरा विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले हरेक दिन अनुगमन भइरहने बताए । उनका अनुसार अध्यागमनले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, भिसा जाँच, कस्टम लगायतका लागि आवश्यक तयारी गरेको छ ।
प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ १४:२९
भाद्र ११, २०७६ आनन्द गौतम
ताप्लेजुङ — नेत्र विक्रम चन्द समूहका जिल्ला कमिटी सदस्य विजय फेम्वू नेकपामा प्रवेश गरेका छन् । साउन २१ गते प्रहरीले गिरफ्तार गरेका उनी हिरासतवाट निस्कनासाथ सत्तासिन दलमा प्रवेश गरेका हुन् ।
फेम्वूलाई बुधबार औपचारिक कार्यक्रम गरेर पार्टी प्रवेश गराइएको नेकपा कार्यालय टिमका सदस्य सन्तोष खतिवडाले जानकारी दिए । उनलाई जिल्ला अध्यक्ष विजय प्रकाश बनेम, प्रदेश सदस्य लक्ष्मी अङछङवो, कार्यालय टिमका सदस्यहरु सन्तोष खतिवडा, सुरज ओझा लगायतले अविर, खादा लगाएर पार्टी प्रवेश गराएका छन् । फक्ताङलुङ गाउँपालिका-५ तापेथोक घरैबाट पक्राउ गरिएका उनलाई प्रहरीले मुद्दा नचलाई छोडेको थियो ।
फेम्वू पक्राउ भएपछि चन्द समूहले विज्ञप्ति निकालेर उनलाई बिनासर्त रिहा नगरे कडा संघर्षका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर विज्ञप्ति निकाल्ने सेक्रेटरी नरपति पौडेल सहित जिल्ला इञ्चार्ज सकल सहितका ताप्लेजुङ र पाँचथरका इञ्चार्ज सहित पाँचजनालाई प्रहरीले झापाको दमकबाट पक्राउ गरिसकेको छ । उनीहरुलाई झापाको चन्द्रगढीमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चन्द समूहका पूर्व जनसरकार प्रमुख तथा जिल्ला कमिटी सदस्य विजय फेम्वू सत्तासिन दल नेकपामा प्रवेश गर्दै ।
प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ १४:०३